Joomla အတွက် Extensions, Components, Modules & Plugins! - Joomla Solutions
Joomla-Solutions.com CMS Joomla အတွက် extension များ!
ငါ့ Joomla ကျွမ်းကျင်မှု
Joomla သို့မဟုတ် WordPress?
Joomla extension များ
Joomla module တွေ
Joomla plugins များ
Joomla တွင်ဘယ်လောက်အထိ install လုပ်လို့ရပါသလဲ။
Joomla site များကိုဖန်တီးရန်မည်သည့် extensions များကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Joomla တွင် extension တစ်ခုသို့မဟုတ် module တစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Joomla Template ပြောင်းပါ
Joomla နဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
ဆောင်းပါးများ - ဖိုင်များ
ဆောင်းပါးများ - Subscriptions
ဆောင်းပါး - ပုံများ
ဆောင်းပါးများ - အီးမေးလ်သတိပေးချက်များ
ဆောင်းပါး - ဖြစ်ရပ်များ
ဆောင်းပါးများ - Paid ဖြစ်ရပ်များ
Joomla CMS အတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ module များနှင့် plugins များ!
Joomla အတွက် package နှင့် module အပါအ ၀ င်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မဆိုမှတ်ချက်နေရာများထည့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
ဤပလပ်အင်သည်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် Dailymotion ဗီဒီယိုကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီ module ကအသုံးပြုသူစာမျက်နှာသို့မဝင်ရောက်မီသူ၏အသက်ကိုအတည်ပြုရန်တောင်းသော modal popup window ကိုပြသသည်။
ဤပလပ်အင်ကသင့်အား Joomla အသုံးပြုသူအကောင့်သို့ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံတစ်ခုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ လျင်မြန်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။
ဤပလပ်အင်သည်သင့်အား Joomla အသုံးပြုသူအကောင့်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤပလပ်အင်ကသင့်အားပုံများစာရင်းကို Joomla ဆောင်းပါးများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤပလပ်အင်သည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏ပရိုဖိုင်တွင် Vimeo ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤ Joomla plugin သည်ဆောင်းပါးတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းမိတ်ဆက်ခြင်းကိုအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤပလပ်အင်သည်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ပရိုဖိုင်တွင် TikTok ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤပလပ်အင် ၂ ပုဒ်သည်သင့်အား Joomla ဆောင်းပါးများမှဖြစ်ရပ်များကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤ Joomla plugin သည်ဆောင်းပါးများကိုကုန်ပစ္စည်းစာရွက်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ configure လုပ်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်နှင့်အချိန်ကုန်သော e-commerce ဖြေရှင်းချက်ကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤပလပ်အင်သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူနိုင်မှုကိုထပ်ဖြည့်သည်။
ဤပလပ်အင်သည်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းများတွင်“ Donate” ခလုတ်ကိုပေါင်းစည်းခွင့်ပြုသည်။
ဤပလပ်အင်သည်သင့်အား Joomla ဆောင်းပါးများနှင့်ဖိုင်များကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုအပိုဆောင်း plugin မှတစ်ဆင့်အခမဲ့သို့မဟုတ်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ဆောင်းပါးများ - Subscriptions.
Joomla အတွက်ဒီ plugin သည်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ profile တွင် Youtube ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်ရဲ့ Username မေ့နေပါသလား?
လူကြိုက်များ extension များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ extensions များသည် Joomla 3.x နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Apache 2.0 နှင့် +
Nginx 1.0 နှင့် +
PHP 5.3.10 နှင့် +
MySql 5.1 နှင့် +
SQL Server 10.50.1600.1 နှင့် +
PostgreSQL 8.3.18 နှင့် +
Plugins - onContentPrepareForm လုပ်ဆောင်ချက်မှလယ်တစ်ခုကိုထည့်ပါ
Joomla template ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
Developer Links များ
သင်၏ Joomla site ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူသော extensions များဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ Joomla ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ထည့်ရန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မူလစာမျက်နှာသို့မဟုတ်မီနူးများမှရှာဖွေပါ။ Joomla CMS ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုကြွယ်ဝစေရန်သင်၏ပလပ်အင်များ၊ module များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Joomla ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်၊ ဆောင်းပါးအသစ်ဘယ်လိုထည့်ရမယ်၊ စတိုးဆိုင်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်၊ module တွေ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေစသဖြင့်သင်ခန်းစာနှင့်သင်ခန်းစာအချို့ကိုလည်းပေးပါတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့သတင်းတွေအများကြီးကိုငါ့ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်သိရလိမ့်မယ်။
Drupal၊ Wordpress, Joomla, Jimdo, Prestashop သို့မဟုတ် Shopify ကဲ့သို့သောအကျော်ကြားဆုံးသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအနက်ကျွန်ုပ်၏ showcase ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များပင်လျှင် Joomla ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၎င်း၏တုန့်ပြန်မှု css တင်းပလိတ်များနှင့်အတူ Joomla သည် website တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ မင်းမှာပရောဂျက်တစ်ခုရှိသလား၊ မြန်မြန်လုပ်ချင်လား။ သင်၏ဒိုမိန်းအမည်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သောသင်၏ ftp ဆက်သွယ်မှုကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောအိမ်တွင်ရှာပါ။ ထို့နောက် Joomla ကိုထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မှုကိုလမ်းညွှန်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ငါကဲ့သို့သော developer တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင် extensions များကို ထပ်မံ၍ တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဆလိုက်ရှိုးပုံများ၊ ဓာတ်ပုံပြခန်းများ၊ ရုပ်ပုံဆလိုက်ဒါ၊ ဝစ်ဂျက်များ၊ သတိပေးစနစ်၊ paypal လှူဒါန်းမှု၊ subscription မန်နေဂျာ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာ၊ မှတ်ချက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ အသက်စစ်ဆေးသူ၊ ပြက္ခဒိန်နှင့်အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လမ်းညွှန်၊ ဗွီဒီယိုပေါင်းစည်းမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အမျိုးအစားကြော်ငြာများစသည်တို့
Joomla နှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးခြင်းသည်မြန်ဆန်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုကြွယ်ဝစေရန်၊ သင်၏သဘာဝရည်ညွှန်းကိုးကားမှုတိုးတက်စေရန်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ပေါ်လာရန်၊ ကလစ်နှိပ်ရန်နှင့်သင်၏ရောင်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမျက်နှာပြင်နှင့်၎င်း၏ WYSIWYG အယ်ဒီတာများ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသော Joomla သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး CMS ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူပါ။
Clement, Joomla က်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးအတွက်အထူးပြု
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Joomla-Solutions.com - Joomla အတွက် extension များ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ module များနှင့် plugins များ။
Joomla! ® နာမည်ကနေကန့်သတ်လိုင်စင်အောက်တွင်အသုံးပြုသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကိစ္စရပ်များ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပါ။
Joomla-Solutions.com Open Source ကိစ္စရပ်များ (သို့) Joomla တို့နှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိ၊ မရှိထောက်ခံသည်။ စီမံကိန်း။